သမီးလေးစားသူများ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Community & Society » သမီးလေးစားသူများ	34
- cherry nwe
Posted by cherry nwe on Jul 22, 2012 in Community & Society, Creative Writing, Society & Lifestyle, Think Different | 34 comments
ဒီမြန်မာနိုင်ငံကပေါ့နော်သမီးလေးစားတဲ့သူတွေကို မှတ်ထားတာလေး၇ှိတယ် သူဒို့ကိုဒီနေ၇ာကနေပြီး လေးစားမှုနဲ့ ၈ါ၇ဝပြုပါတယ်၇ှင်
ဒါဂတော့ ညလေးတို့ တိုင်းပြည်၇ဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း အနှစ်တစ်သောင်းမှာတယောက်ပေါ်ဘို့မလွယ်ပါ
ဒါဂတော့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် မိသားစုနဲ့ကိုယ်ပိုင်လွပ်လပ်ခွင့်တွေဆုံး၇ှုံးခံပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကျက်သေ၇အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမေ
ယုံကြည်ချက်တစ်ခုအတွက် ခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဓတ် ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် နဲ့အ၇ာ၇ာစွန့်လွှတ်စွန့်စားဝံ့သူ နုညံ့တဲ့နှလုံးသားပိုင်၇ှင်ဦးမင်းကိုနိုင်
မှတ်ချက်။ ။ကာယကံရှင်မှ သူ၏ ဓာတ်ပုံအား ခွင့်ပြချက်မရပဲ မတင်ပေးပါရန် အီးမေးလ်ပို့တောင်းဆိုလာသဖြင့် ဖျက်ထားလိုက်ပါသည် ။
ရွာသူ၊သားများ၏ ဓာတ်ပုံများ တင်လိုပါက ခွင့်ပြု၊ မပြု အရင်မေးပြီးမှသာ တင်ပေးကြပါနော ။
ဘဘဦးပေါက် ဘဘဦးဖေါ ဘဘပါလေရာ ဘဘဦးပေ စတဲ့လေးစားတဲ့လူတွေလည်း၇ှိပါသေးတယ် ဒါ့ပုံမ၇ှိလို့မတင်၇တာ ညလေးကိုခွင့်လွှတ်ပါနော်
မေ့လို့သမီးမိတ်ဆက်ပါ၇စေ သမီးနာမယ်ချယ်၇ီပါ မိုးကုတ်သူပါ ၇န်ကုန်မှုာ သင်တန်းတွေတက်၇င်း ဘဝတက်လမ်း၇ှာဖွေနေသူပါ
About cherry nwe
nwe cherry has written 1 post in this blog.
View all posts by cherry nwe →	Blog
ကြောင်ကြီး says: ချယ်ရီဂလေးကို ဦးကြောင်ခြစ်မိတော့မယ်…အရှေ့နည်းနည်း တိုးပေးပါလား..။ :cool:
မောင်ပေ says: လုံးဝရှေ့မတိုးလိုက်ပါနဲ့ ချယ်လေးရယ်
Foreign Resident says: သမီးရဲ့ လေးစားမှုကို မခံယူဝံ့ပါဘူးကွယ် ။
အပြင်မှာ မတွေ့ဘူးလို့ လေးစားနေတာပါ သမီးရယ် ။
အပြင်မှာ အဘက တကယ့် သင်္ဘောသား လူဆိုး လူကြမ်းကြီးကွယ့် ။
အခု Avatar ထဲကပုံက သမီးရဲ့တကယ့် ဓါတ်ပုံလား ။
ချောလိုက်တဲ့ သမီးလေး ။
water-melon says: Foreign Resident ကလည်း avatar ပုံက မေသက်ခိုင်ပုံပါ
မှောင်မဲနေတဲ့ သဇင်ကျတော့ သိတယ်
Foreign Resident says: သိဘူးလေကွယ် ၊ အဘ တို့က အသက်ကြီးပြီကွယ် ။
ခုခေတ် မင်းသမီးတွေကို ( သဇင့်လို ) အရမ်း နာမည်ကျော်မှပဲ သိတော့တယ် ။
ဘဲဥ says: ဟဲ့ဟဲ့ ဖြဲမ သဇင်က မှောင်နေတာ ညည်းဘယ်လိုတိလဲ အာဟိ :grin:
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဘဲဥမရဲ့ သဇင်က အားလုံးမမှောင်ဘူး တစ်ခန်းထဲဘဲမှောင်တာ
ကြောင်လေး says: တော်တော်သွက်တဲ့ဘဘကြီးတွေ၊ နှူးဘာဂိုဏ်းတောင် နောက်ကောက်ကျသွားပြီ။
water-melon says: ဒါ့ပုံမ၇ှိလို့မတင်၇တာ ညလေးကိုခွင့်လွှတ်ပါနော်
မေ့လို့သမီးမိတ်ဆက်ပါ၇စေ သမီးနာမယ်ချယ်၇ီပါ မိုးကုတ်သူဆိုတော့ ညလေးဆိုတာ ရွာထဲမှာရှိပြီသားလူလား
ညလေးတွေရော ချယ်ရီရော ဘာတွေလဲတော့
ကြည့်ရတာ ရွာသူအဟောင်းလား ပုံက ရခိုင်အလှူတုန်းကထင်တယ်
P chogyi says: စာလုံးပေါင်းကိုခွဲရေးရင်ကောင်းမယ်
မဟုတ်ရင် သမီးလေး စားလိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်
ဘဲရှုပ် says: ဂျယ်ယီ နာမီလေး တိလို့ ဂျစ်ချင်သည် ♪♪♪
ရတနာမြေ မိုးကုတ်သူလေးကို ရွာသား များက အဟမ်း
ညလေး says: ဖြဲရယ်……..ညလေးအစစ်လာပါပြီ….ဒီကညီမလေးနာမည်က…ချယ်ရီ တဲ့နော်….
Wow says: မူပိုင်ခွင့်တော့ လုပ်သင့်ဘီနော် ညလေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 570
ဖိုးထောင် says: သူတို့ကျတော့လည်းကြိုဆိုလိုက်ကြတာ သောင်းသောင်းဖြဖြပဲနော် သူကြီးကလည်း သထာတယ် ၅၀၀၀ တန်းပေးတာပဲ ဘာပဲပြောပြော ချယ်ရီလေးကိုတော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုပါတယ် ရွာရဲ့ဥပဒေသတွေ ကိုတော့ သီးသန့် ကိုဖိုးထောင်သင်ပေးပါ့မယ် ဘဘဦးပေ လို့မခေါ်နဲ့ သိပ်မကြီးသေးပါဘူး သူက ကိုကြီး တို့ထက် ၈ နှစ်လောက်ပဲကြီးတာ ရှိလှမှ ၃၄၊၃၅ နှစ်ပေါ့ ကိုကြီးကတော့အခု ၂၆ နှစ်ထဲမှာ လိုတာရှိရင်ပြော နော် ဒီရွာမှာ ကိုကြီးက အားလုံးပိုင်တယ်
မိုးကုတ်သူချယ်ရီလေးရေ ညလေး လို့တော့မသုံးနဲ့။
အဲတော့ ညမကြီးတကြီး ညပိစိကွေး ညလတ် ညပေါက်စနု ညပူးတူးတူးလေး ကြိုက်တာရွေး
မတော်လို့များ ကင်မရာချော်သွားရင် တွေးရဲပေါင်အေ…………………….
ဖိုးထောင် says: ခပ်တည်တည်နဲ့ဖွန်ကြောင်နေတာ ပြောချင်တာမေ့သွားတယ် ချယ်ရီလေး ဒီပုံဘယ်ကမလာတာလည်း ဒါရခိုင်အလှူပုံပဲ ဓါတ်ပုံဆရာကို ဓါတ်ပုံပြန်ရိုက်ထားတယ် ချယ်ရီလေး လေးစားတာအဲဒီကျောင်းဒကာကြီးလားဗျ
Solid_Sn@ke says: မတူတဲ့အတွေးနဲ့မန့်ရရင်ဖြင့် ….
ကိုချောပုံ ကို မြင်ရလို့ …
အရီးခင်လတ် says: အရီးလဲ ကဘချောကို သတိရ နေပါတယ် မောင်ဂီရေ။
ကန်တီး မှာ လေများ ခဲ့ကြပုံများ။
သမီး လေးစားသလို အရီးလဲ သူ့ တို့ အားလုံးကို လေးစားပါတယ်။ :-)
captainamerica says: ဘဘဦးပေတဲ့ အာဟိ အောင်မလေးဟဲ့ကပေရဲ့ ဖြစ်ရလေ
pan pan chit says: ကပေတောင် “ဘ” ဖြစ်သွားဘီ
ဟိဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 24
ဆယာလေး ( အော်စကာ ) အထီး says: လေးစားထိုက်သူကို လေးစားခြင်းသည် မင်္ဂလာ တစ်ပါးပင် ဖြစ်၏.။
အကြင် လေးစားနေသူ၊ လေးစားထိုက်သူတို့ အားလည်း အကျွန်ုပ်မှ တန်ဖန်ပြည် လေးစားအပ်ပါ၏.။
အကျွန်ုပ်သည် လေးစားထိုက်သူလဲ မဟုတ်၊ လေးစားနေသူလဲ မဟုတ်၊ ကြားနေ ဖြစ်လတံ့သော သုံး နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း စားသူပင် ဖြစ်ပါ၏.။
ဦးဦးပါလေရာ says: ကျုပ်တို့ တံခါးမှုးကြီးက သူများရိုက်ပြမှ ဒီလိုဒီလိုခန့်ချောကြီးမှန်း သတိထားမိတော့တယ် … :D
အလှူခံစရာတယောက်တိုးလာတာ .. အဲလေယောင်လို့.. ရွာသူတယောက်တိုးလာတာ
ကြိုဆိုပါတယ် တူမလေးရယ်…. :P
ဆယာလေး ( အော်စကာ ) အထီး says: တံခါးမူးကြီးကို ခုမှ မြင်ဖူးတယ်ဗျာ
တံခါးမူးကြီးဆိုတာ ကျွန်ုပ် နီးနီးကို ခန့် ပြီး ခြော တာပဲ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: မိုးကုတ်သူလေးရေ …
ဒါနဲ့ မိုးကုတ်သူလေးဂို တွေ့ဘူးပါဒယ် ..
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ .. :D
နေ၀န်းနီ says: အော်…….. သူတို့တွေ သိပ်ပျော်နေကြပါလား ………… :D
water-melon says: အစတုန်းက သမီးလေးစားသူများခေါင်းစဉ်ကို
ရုတ်တရုက်ဖတ်လိုက်တော့ သမီးလေး စားသူများလို့ထင်နေတာ
နေ၀န်းနီ says: တူ့ဟာတူ စားချင်တာစာမှာပေါ့ ဖျဲမ ရဲ့ ….။ နင်တော်တော် စပ်စပ်စုစုနိုင်တာပဲ…။ ပီးဒေါ့ ငါ့ကိုများ မီးမရသွားပြီလားလေးဘာလေးနဲ့ နင်တော့တွေ့ဦးမယ်…။ ဟင်းးးးး :P
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ်သားဘဲဖရဲမရဲ့
သန်းထွဋ်ဦး says: ညီမလေး ချယ်ရီရေ ကြိုဆိုပါ၏။တတ်အားသရွေ့ စာများကြိုးစားရေးပါနော့။
ko khin kha says: သမီးချယ်ရီက လေးစားတဲ့သူတွေပြောပြလို့ ကျွန်တော်လည်းလေးစားတဲ့သူ တစ်ယောက်ကိုပြောပြပါရစေ၊
သူက တကမ္ဘာလုံးက ကလေး၊လူကြီး လူငယ်၊လူရွယ်တွေနဲ့ အဖိုး၊အဖွားစတဲ့ အရွယ်မရွေး အကုန်လုံး သူကို ကြိုက်ကြတယ်၊ အဲဒီလောက်ကို ကျော်ကြားတဲ့အတွက် လေးစားတာပါ။
သူကတော့ Mr.Bean ပါဘဲ။
etone says: ရွာထဲမှာက ညလေးတစ်ယောက်က ရှိပြီးသားဆိုတော့ …. ညလေးလို့ မိတ်ဆက်တာနဲ့… ဇဝေဇ၀ါတောင်ဖြစ်သွားတယ် … ။
နာမည်တူနေပေမယ့် … အရင်တယောက်ကတော့ ညလေးက ညလေးပဲ … ။ ဒီညလေးကတော့ … ချယ်ရီလို့ပဲ ခွဲမှတ်ထားရတော့မယ် … ။
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: Cherry..ရေလေးစားပါတယ်…
ဘဲဥ says: ချယ်ရီလေး စားမယ် အဲ့ဟုတ်သေးပါဘူး
ချယ်ရီ လေးစားနေမယ် ဟုတ်တယ် အဲ့လို Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply
Comments By Postမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Ma Ma - ရွှေ ကြည်``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - အလင်း ဆက် - မောင် ပေသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - အလင်း ဆက် - TNAရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - garuda - weiweiဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - Mr. MarGa -etoneနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - Mr. MarGa - lele kyiSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - မောင် ပေ - Lay Paiလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - မောင် ပေ - Ma Maစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - မောင် ပေ - ခင် ခမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ -etone - may july“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - ko pauk mandalay - ခင် ခ“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - ko pauk mandalay -etone``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - ခင် ခ - Ma Maအတု - ခင် ခ - kyeemiteရွာသူ/သားများ အတွက် -etone - ရဲစည်ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - ခင် ခ - kyeemiteအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - pazflor - ဦးဦးပါလေရာမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - padonmarEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67456 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62213 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59135 Kyats )MaMa (58007 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...